Iindawo eSpain ezibonakala kuncwadi | Uncwadi lwangoku
Uncwadi lwethu alondliwanga ngamabali amnandi kuphela, kodwa nakwiindawo ezininzi ezincoma idolophu ethile, isixeko okanye iSpanish enclave engafakwanga ngonobumba. Ukusuka eLa Mancha del Quijote ukuya kuloo dolophu ilahlekileyo apho uJuan Ramón Jiménez wahamba nge-esile, siza kuhamba kwezi zinto zilandelayo indawo eSpain ezibonakala kuncwadi.
1 Pamplona: Fiesta, nguErnest Hemingway
2 UMoguer: uPlatero y yo, nguJuan Ramón Jiménez
3 ICampo de Criptana: UDon Quixote de la Mancha, nguMiguel de Cervantes
4 ICarabanchel Alto: Manolito Gafotas, ngu-Elvira Lindo
5 Intili yaseBaztán: Umgcini ongabonakaliyo, nguDolores Redondo
6 ILa Albufera: Iingcongolo kunye noMdaka, nguVicente Blasco Ibáñez
7 I-Orchard yaseCalisto neMelibea: La Celestina, nguFernando de Rojas
8 Icawa yaseSanta María del Mar: ICathedral yoLwandle, nguIldefonso Falcones
Pamplona: Fiesta, nguErnest Hemingway
Ukufota: uGraeme Churchard
Kwiminyaka ye-20, imeko yamanye amazwe yaqhubeka nokubona iSpain njengelizwe elihlwempuzekileyo neloyisayo xa kuthelekiswa nezinye izizwe kwilizwekazi elidala. Nangona kunjalo, iMfazwe yeHlabathi yokuQala ayizukuzisa kuphela u-Ernest Hemingway eYurophu, kodwa yayiza kumenza abe ngomnye wababhaqi bejografi. Umzekelo, Isixeko sasePamplona esikwiSanfermines umbhali weXhego noLwandle wazibhaptiza ukuba anike ubomi kwincwadi yakhe yokuqala, Fiesta, yapapashwa ngo-1926. Emva kokukhululwa kwayo, lo msebenzi awuzange ube yimpumelelo nje kuphela kodwa zithunyelwe ehlabathini umfanekiso Spain kunye festive nethemba.
UMoguer: uPlatero y yo, nguJuan Ramón Jiménez
Emva kokusweleka kukayise, uJuan Ramón Jiménez wabuyela kwidolophu yakowabo iHuelva, eMoguer, eyokunceda usapho olonakeleyo. Imeko eyonyuswe ngumfanekiso wendawo yokuzalwa eyonakeleyo, kude nekhaya apho umbhali wayehlala khona njengomntwana. Le yindlela uJiménez aqala ngayo ukukhupha zonke iinkumbulo ngesithuthi soncwadi esifana nedonki yePlatero, isilwanyana wafumanisa ubuncinci bedolophu encinci yaseAndalusian: amabhabhathane amhlophe aphephezela ebusuku, ukubhiyozelwa kukaCorpus Christi, ubukho be ii-gypsies kwisikwere esigcwele uvuyo kunye nokuzonwabisa.
Ngaba ungathanda ukufunda UPlatero kunye nam?
ICampo de Criptana: UDon Quixote de la Mancha, nguMiguel de Cervantes
Ngo-2005, kumsitho we isikhumbuzo senkulungwane yesine UDon Quijote waseLa Mancha, yabhengezwa eSpain indlela yokuqala esekwe emsebenzini kaMiguel Cervantes, Ukuba yimpumelelo. Ngaphezulu kweekhilomitha ezingama-2500 ezisasazeke ngaphezulu koomasipala abali-148 apho undwendwe lunokuqala khona ukusuka eToledo luze luphele eSigüenza, ludlule kwi-icon ye-El Toboso okanye owona mfanekiso "we-quixotic": amatye okusila alishumi eCampo de Criptana ukuba namhlanje kube luphawu loluntu lwaseLa Mancha apho kwakukhe kwakho izigebenga ezihlaselwe lelona gosa lidumileyo leeleta.
ICarabanchel Alto: Manolito Gafotas, ngu-Elvira Lindo
Abantu baseMadrileni banokuthi bayayazi, kodwa mhlawumbi abaninzi baseSpain bahlala kwindawo yaseCarabanchel Alto emva kokufunda UManolito Gafotas. ICarabanchel, ebandakanya ngaphezulu kwama-240 amawaka abemi, iye yaba yeyona ndawo ibalaseleyo yokuboniswa kwabo basebenza eSpain ebonwa yinkwenkwana eyayikhohlakele eyayihlala nabazali bayo, uyisemkhulu uNicolás kunye nomntakwabo, u-El Imbécil. Olona seto lungakhathaliyo lwe Uncwadi eMadrid ephuma kwiChocolatería San Ginés apho iValle-Inclán isete izibane zeBohemian okanye U-Barrio de las Letras wajika waba liziko lokubhala elikomkhulu kunye nendawo yesiqhelo yababhali abanjengo Góngora, Cervante okanye Quevedo.
Intili yaseBaztán: Umgcini ongabonakaliyo, nguDolores Redondo
Yiba yenye ye impumelelo enkulu kuncwadi lwaseSpain Kwiminyaka yakutshanje, I-Baztán trilogy nguDolores Redondo (owenziwe ngu-The Invisible Guardian, The Legacy in the Bones and Offering to the Storm) waphicotha iimfihlakalo zentlambo yaseNavarrese apho kuphandwa khona ukubulala okwahlukeneyo nguMhloli Amaia Salazar, oza kusombulula eli tyala kufuneka abuyele kowabo. , UElizondo, awayehlala efuna ukubaleka kuyo. Yazisa kwiitayitile ezintathu ze-saga, i Intili yaseBaztán ukuthandwa kwayo kuye kwanda emva kokupapashwa kweencwadi, kutsala ukuthembeka komsebenzi wokukhangela amangcwaba, amahlathi kunye nemilambo ebethelela iyelenqe elinje.
ILa Albufera: Iingcongolo kunye noMdaka, nguVicente Blasco Ibáñez
Ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX, yendalo ifunyenwe eBlasco Ibáñez ngomnye wabameli bayo ababalaseleyo, ngakumbi ngenxa yemisebenzi enje Iingcongolo nodaka, umbhali odumileyo waseValencian. Inoveli apho useto lubalwa njengomntu omnye kubulewe ukubaluleka kwalo kumxholo wosapho lakwaPaloma, usapho lwamafama ahluphekayo ahlala kwidolophu yase El Palmarimi embindini welona chibi likhulu lamanzi acocekileyo eSpain, Iikhilomitha ezili-10 kumazantsi eValencia. Kuwo onke amaphepha, ngakumbi kwicandelo lawo lokuqala, iAlfufera iboniswa njengesixhobo esincinci esisecaleni, apho imigxobhozo, amasimi erayisi kunye neelwandle eziyimfihlo zilungiselela i-labyrinth apho Iinoveli ezilungileyo zaseSpain zenkulungwane yama-XNUMX.
I-Orchard yaseCalisto neMelibea: La Celestina, nguFernando de Rojas
Salamanca ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX Yaba sisimo somnye wemisebenzi emikhulu yoncwadi lwethu: Celestine, okwabizwa ngokuba yiTragicomedy kaCalisto noMelibea, abo baphambili babini badityaniswa ngunongogo kwaye inxenye enkulu yebali labo lothando yenzeka kwigadi yeziqhamo ekhethwe ngumbhali, uFernando de Rojas. Imiphunga yasezidolophini eyavulwa kwakhona ngo-1981 phantsi kwegama likaHuerto de Calisto y Melibea, emi ecaleni kodonga olunqumla umlambo iTormes, igama elisikhumbuza imiqolo yokuqala I-Lazarillo de Tormes ibekwe kwikomkhulu laseSalamanca ngaphambi kokutsiba ukuya eToledo, isixeko esiphambili apho ibali lenzeka khona.
Icawa yaseSanta María del Mar: ICathedral yoLwandle, nguIldefonso Falcones
Ipapashwe ngo-2006 kwaye yajika yaba yinoveli yokuthengisa ezininzi kwiinyanga ezimbalwa, Icawe enkulu yolwandle ibalisiwe ukwakhiwa kweCawa yaseSanta María del Mar kwindawo yabalobi abathobekileyo eLa Ribera apho wayehlala khona u-Arnau, umfana esathi safunda ngaye iimfihlelo ze-medieval Barcelona. Okwangoku, esi sakhiwo saqala ukwakhiwa ngo-1329 sesinye sezixhobo Iimpawu ezinkulu zoncwadi lweSixeko saseCondal esithandwa ngababhali abanjengoCarlos Ruiz Zafón, uCarmen Laforet okanye uJuan Marsé.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iindawo eSpain ezibonakala kuncwadi
Iincwadi ezilungileyo zibekwe kwiCaribbean